Wasiirka arrimaha dibadda oo Ergeyga QM kala hadlay geeddi socodka siyaasadda Soomaaliya – Radio Muqdisho
Wasiirka arrimaha dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga Soomaaliya,Danjire; Axmed Ciise Cawad, ayaa Xafiiskiisa ku qaabbilay Shalay, wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabbilsan Soomaaliya, ahna madaxa howlgalka kaalmaynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM), James Swan.
Labada Mas’uul ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha la xiriira siyaasadda, nabadgelyada, Bini’aaddannimada iyo dhaqaalaha Dalka.
Wasiir Cawad waxa uu soo dhoweeyay mowqifka wanaagsan ee Qaramada Midoobey ay ka taagan tahay taageeridda iyo tallaabooyinka Dowladda ee ku wajahan mideynta Soomaalida, si loo gaaro himillada Dadka, isagoo caddeeyay in kulamada noocan oo kale ah ay xoojinayaan kaalinta Qaramada Midoobey ee danaha Dadka Soomaaliyeed.
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda JFS oo 10,000 kun ugu deeqday gurmadka fatahaadaha